08/11/2018 - Page 3 sur 3 -
Mahazoma : Zara fa nisy mpifidy
Misedra olana ny fotoam-pifidianana tany Ambodimanga Mahazoma noho ny nafitsoky ny dahalo. Ny alin’ny talata lasa teo dia nisy fanafihana omby tany amin’io fokontany io. Lasan’ireo olon-dratsy avokoa ny omby tany an-toerana, ka lasa nanara-dia …Tohiny
Tamban-jotra tserasera « Facabook » : Niteraka fisavoritahana
Isan’ ny nampisavoritaka ny fifidianana omaly ny fampitam-baovao tamin’ ny halalan’ny tamban-jotra tserasera Fb, satria dia maro ireo vaovao tsy marim-pototra nivoaka ka nampikorontana ny saim-bahoaka. Somary tara ihany anefa ny Ceni mitondra fanazavana sy …Tohiny
Nanambara tamin’ ny fomba ofisialy ny alatsinainy lasa teo ny fanatanterahan’ny fikambanana AFRIC (Association for free research and international cooperation) miaraka amin’ ny mpiara miombon-antoka aminy CIS-EMO (commonwealth of independent states-Election monitoring organization), ny fanatanteran’izy …Tohiny
Nanjakan’ny kandidà laharana faha 25 Marc Ravalomanana ny vokam-pifidianana, hatramin’ izao ora hanoratana izao. Raha ny vokatra vonjy maika azo tamina biraom-pandatsaham-bato miisa 318 amin’ ireo 24 852, dia mitarika amin’ ny salan’isa 50,73% ny …Tohiny
Nanomboka ny fiandohan’ny volana jona, dia maro ireo hetsika entina hanamarihana ny fetim-pirenena malagasy. Hetsika miainga amin’ny lohahevitra hoe « fitiavan-tanindrazana sy filaminana, antoky ny fampandrosoana ho fisandratan’i Madagasikara ». Taorian’ny « Carnaval de Madagascar ...Tohiny
Plu commun vocabules omnicos directe